MKPEBI IHUENYO ADỊGHỊ AGBANWE WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Mkpebi ihuenyo adịghị agbanwe Windows 10
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwuo mkpebi ihuenyo na Windows 10, ọ fọrọ nke nta ka ọ dịrị mfe mgbe niile, ọ dịkwa mkpa ka a kọwaa ihe ndị dị mkpa na ihe omume. Olee otú ị ga-esi gbanwee mkpebi ihuenyo nke Windows 10. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike inwe nsogbu - mkpebi ahụ agbanweghị, ihe maka ịgbanwe ya adịghị arụ ọrụ , yana usoro mgbanwe ọzọ anaghị arụ ọrụ.
Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ihuenyo mkpebi nke Windows 10 adịghị agbanwe, ụzọ isi dozie nsogbu ahụ ma weghachite ike ịmegharị mkpebi ahụ na kọmpụta na laptọọpụ, ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Ihe mere na enweghị ike igbanwe ihuenyo ihuenyo
Dịka ịchọta, ịnwere ike ịgbanwe mkpebi ahụ na Windows 10 na ntọala site na ịpị aka nri na ebe efu na desktọọpụ, na-ahọpụta "Ngosipụta Ntọala" (ma ọ bụ na Ntọala - System - Ngosipụta). Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, nhọrọ nke ikikere anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ naanị otu nhọrọ dị na ndepụta nke ikikere (ọ ga-ekwe omume na listi ahụ dị ma managhị ikikere).
Enwere ọtụtụ ihe bụ isi mere mkpebi ihuenyo na Windows 10 nwere ike ọ gaghị agbanwe, nke a ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Ejighi kaadị ọkpụkpọ vidiyo achọrọ. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ịpịrị "Mmelite Nduzi" na njikwa ngwaọrụ ma nata ozi na awụnyewo ndị ọkwọ ụgbọala kachasị mma maka ngwaọrụ a - nke a apụtaghị na ị wụnye ọkwọ ụgbọala ziri ezi.
Malfunctions na ọkwọ ụgbọelu vidiyo.
Ojiji nke na-adịghị mma ma ọ bụ nke mebiri emebi, ndozi, ndị ntụgharị maka ijikọta ihe nyocha ahụ na kọmputa.
Nhọrọ ndị ọzọ ga-ekwe omume, ma nke a bụ ihe ndị ọzọ. Ka anyi chigharia n'uzo iji mezie onodu a.
Esi edozie nsogbu ahụ
Ugbu a isi ihe dị iche iche banyere ụzọ dị iche iche iji dozie ọnọdụ ahụ mgbe ị na-enweghị ike igbanwe ihuenyo ihuenyo. Nzọụkwụ mbụ bụ ịlele ma ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ dị mma.
Gaa na Windows 10 Njikwa Ngwaọrụ (iji mee nke a, ị nwere ike ịpị aka nri na bọtịnụ "Malite" ma họrọ ihe achọrọ achọrọ na menu ndị ọzọ).
Na njikwa ngwaọrụ, mepee akụkụ "Ihe ntanetịime vidiyo" ma hụ ihe egosiri n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na "Ntọala Ntọala Ntanetị (Microsoft)" ma ọ bụ "Ihe Nkiri Video" anaghị efu, mana na mpaghara "Ngwaọrụ Ndị ọzọ" enwere "Onye Nchịkwa Video (VGA Compatible)", anaghị ebunye ọkwọ ụgbọala vidiyo. Ọ bụrụ naadịadị ndịna-emeputa ziri ezi (NVIDIA, AMD, Intel) kwuru kpọmkwem, ọ ka bara uru na-ewere usoro ndị ọzọ.
Na-echeta (ọ bụghị naanị na ọnọdụ a) na ịpị aka na ngwaọrụ na njikwa ngwaọrụ ma na-ahọpụta "Ọkwa na-eweta nkwalite" na ozi na-esote na ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ a abanyelarị na-ekwu nanị na sava Microsoft na Windows gị Enweghị ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ, ọ bụghị na ị nwere ọkwọ ụgbọala ziri ezi.
Wụnye ọkwọ ụgbọ ala. Maka obere kaadị ndị dị na PC - site NVIDIA ma ọ bụ AMD. Maka PC nke nwere vidiyo vidiyo zuru ezu - site na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị na-emepụta katọn maka MP gị. Maka laptọọpụ - site na ebe nrụọrụ weebụ nke laptọọpụ rụrụ arụ maka ihe nlereanya gị. N'okwu a, maka ikpe ikpe abụọ ikpeazụ, wụnye ọkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ọhụrụ na saịtị ọrụ ahụ ma ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala maka Windows 10 (wụnye maka Windows 7 ma ọ bụ 8, ma ọ bụrụ na etinyeghị ya, gbalịa na-enyocha onye nhazi na ọnọdụ nkwado).
Ọ bụrụ na nwụnye adịghị ihe ịga nke ọma, na ụfọdụ ọkwọ ụgbọala abanyela (nke ahụ bụ, ọ bụghị ihe ntanetị vidio dị mkpa ma ọ bụ onye na-ahụ vidiyo na VGA), gbalịa wepu kpamkpam ọkwọ ụgbọala vidio dị ugbu a, lee Otu esi ewepu onye ọkwọ ụgbọala vidiyo kpamkpam.
N'ihi ya, ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga-enweta ezigbo ọkwọ ụgbọala vidiyo dị mma, yana ike ịgbanwe mkpebi ahụ.
Ọtụtụ mgbe ikpe ahụ dị na ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo, Otú ọ dị, nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ime, ya mere, ụzọ iji dozie ya:
Ọ bụrụ na ejiri ihe ntanetị jikọọ elele ahụ ma ọ bụ na ị zụtara ọhụrụ USB maka njikọ, ị nwere ike ịbụ ikpe ahụ. Ọ bara uru na-agbalị nhọrọ ndị ọzọ njikọta. Ọ bụrụ na e nwere ụdị nyocha ọzọ nwere njikọ dịgasị iche, i nwere ike ime nnyocha na ya: ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na ya, ị nwere ike ịhọrọ mkpebi, mgbe ahụ, okwu ahụ doro anya na eriri ma ọ bụ nkwụnye (ọ bụghị mgbe - na njikọ na nyocha).
Lelee ma ọ bụrụ na nhọrọ nke mkpebi gosipụtara mgbe ịmalitegharịrị Windows 10 (ọ dị mkpa ka ịmegharịa, ọ bụghị imechi na ike na). Ọ bụrụ na ee, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala chipset site na saịtị ahụ. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ nọgidere, gbalịa ịkwụsị ngwa ngwa nke Windows 10.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-egosi spontaneously (dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ bụla egwuregwu), e nwere ụzọ ịmalitegharịa ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo site na iji ụzọ mkpirisi keyboard Nweta + Ctrl + Shift + B (Otú ọ dị, ịnwere ike iji obere ákwà ngebichi mechie ya ma ọ bụrụ na a manyeghachi ya).
Ọ bụrụ na edozighị nsogbu ahụ n'ụzọ ọ bụla, lelee NVIDIA Control Panel, AMD Catalyst Control Panel ma ọ bụ Intel HD Control Panel (Intel graphics system) ma hụ ma ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ihuenyo mkpebi ahụ.
Enwere m olileanya na nkuzi ahụ wee bụrụ ihe bara uru ma otu n'ime ụzọ ndị ga - enyere gị aka nwetaghachi ohere nke ịgbanwe agbanwe mkpebi ihuenyo nke Windows 10.